Abụ Ọma 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 12:1-8
Ntụziaka e nyere onye nduzi. A ga-eji ụbọ akwara kpọọ ya n’ụda dị ala.+ Abụ olu ụtọ Devid. 12 Jehova, biko, zọpụta m,+ n’ihi na onye na-eguzosi ike n’ihe anọkwaghị;+ N’ihi na e nwekwaghị ndị kwesịrị ntụkwasị obi n’etiti ụmụ mmadụ. 2 Ha na-agwa ibe ha okwu ụgha;+ Ha na-eji egbugbere ọnụ ire ụtọ+ ekwu okwu ọbụna n’ihu abụọ.+ 3 Jehova ga-ebepụ egbugbere ọnụ niile ji ire ụtọ ekwu okwu, Bụ́ ire nke na-ekwu okwu mpako,+ 4 Ndị sịrị: “Anyị ga-eji ire anyị nwee mmeri.+ Anyị ga-eji egbugbere ọnụ anyị na-ekwu ihe masịrị anyị. Ònye ga-abụ nna anyị ukwu?” 5 “N’ihi ibukọrọ ihe ndị nọ n’ahụhụ, n’ihi ude ndị ogbenye na-asụ,+ M ga-ebili ugbu a,” ka Jehova kwuru.+ “M ga-echebe ya ka onye ọ bụla nke na-elelị ya ghara ime ya ihe ọ bụla.”+ 6 Okwu Jehova bụ okwu dị ọcha,+ Dị ka ọlaọcha a nụchara anụcha, nke a nụchara ugboro asaa n’ite ọkụ e ji agbaze ihe nke e gwunyere n’ala. 7 Gị onwe gị, Jehova, chebe ha;+ Chebe onye nke ọ bụla ruo mgbe ebighị ebi ka ọgbọ a ghara ime ya ihe ọ bụla. 8 Ndị ajọ omume na-akpagharị, N’ihi na ụmụ mmadụ na-eto ihe ọjọọ.+
Abụ Ọma 12